जाडोमै किन सताउँछ बाथले? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य जाडोमै किन सताउँछ बाथले?
२०७५, १७ कार्तिक शनिबार १३:०१
बाक्लो मोजा तथा पञ्जा लगाउने, चिसोबाट जोगिने, शरीरलाई न्यानो राख्ने । लुगा धुने र भाँडा माझ्नुपर्दा रबरको ग्लबस लगाउने गर्नुपर्छ । साथै जाडोमा तातो पानीले नुहाउने गर्नुपर्छ। nagariknews.com
Previous articleमृगौला पीडित छन्त्याललाई कोरियाबाट १ लाख ७२ हजार सहयोग (विवरण सहित)
Next articleस्मरणशक्ति बढाउने काइदा